१२ बजे राती चि,हान खन्ने धामी र बाबा बीच पर्यो ल,फडा, बाबाको प्रस्न सुन्दा सबै छक्क परे, अब के होला ? (भिडियो सहित) - नेपाली खोज
१२ बजे राती चि,हान खन्ने धामी र बाबा बीच पर्यो ल,फडा, बाबाको प्रस्न सुन्दा सबै छक्क परे, अब के होला ? (भिडियो सहित)
करिब छ बर्ष अगाडी मृत्यु भएका जीवन राईको आत्मा हरेक बिरामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्रसित बनेको छ । बच्चादेखि वृद्ध सबै बिरामी परेपछी धामी ले चिन्ता बस्न सुरु गरेको तीन दिनसम्म पनि केही पत्ता नलागेपछि केही गाउँलेहरुले धामीलाई कुटपिट समेत गरेका थिए । बिगत सुनाउदा सबै डराए
अहिले झाक्रीको घरमा भक्तजनहरुको भिड धेरै हुन थालेको छ । मोरंगमा रहेका अर्का जंगी बाबाले धामीलाई भेटेर कडा प्रस्न गरेका छन्, अन्त्यमा जंगी बाबा पनि धामी संग झुके ,भिडियोमा हेर्नुहोला ।
रमेश र नन्दामा जुठो खुवाउदा यस्तो सम्म भयो, रमेशको गितमा दाई र दिदीको दमदार टक्कर, नन्दा हासेर भुतुक्कै (भिडियो सहित)
१७ जना बालबालिका पालेकि सरुको मन छुने कथा (भिडियो सहित)